हिमानी पुत्री पूर्णिकाले लेखिन् यस्तो स्टटस – Online Nepal
May 11, 2020 333
काठमाडौं – पूर्वयुवराज पारस शाह र हिमानीकी छोरी पूर्णिका शाह केही समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय हुन थालेकी छन् ।हुन त उनका हजुरबुबा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, बाबु पारस र आमा हिमानी पनि सक्रिय नै छन् । तर, पूर्णिका भने साहित्यिक रचना, विचार र दर्शन जस्ता कुरा लेख्न मन पराउँछिन् ।उनी सामाजिक सञ्जालमा कथा, कविता लगायत साहित्यिक सिर्जनाहरु पोस्ट गर्दै आएकी छिन् । अहिले उनले विज्ञान किन असफल भयो ? भन्ने शीर्षकमा उनले आफ्ना विचारहरु पाठकमाझ पस्केकी छिन्-
पहिला मानिसहरु खुल्ला कुवाँ,पधेराँको पानी पिउँथे र पनि १०० बर्ष बाँच्थे । अहिले घर घरमा धारो जोडिएको छ, फिल्टर राखिएका छन् र पनि ४० बर्षमै बुढौलीले छोएको छ ।पहिले खुल्ला कोलमा पेलेको दुषित तेल खान्थे र पनि भरपुर श्रम गर्न सक्थे । अहिले डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर तेल खान्छन र पनि जवानीमै स्याँस्याँ र फ्याँफ्याँ गर्छन ।
पहिले ढिक्के नुन खान्थे र पनि स्वस्थ थिए, अहिले आयोडिन युक्त नुनसंगै प्रेसर लो र हाईको गोली पनि खान्छन ।
पहिले कोईला, निम, बज्रदन्ती ले दाँत चम्काउथे र ८० बर्ष सम्म पनि मजाले चपाउँथे ।
अहिलेका कोलगेट सुरक्षाले डेन्टिस्टको चक्कर लगाउछन ! पहिले पाँच गाँउमा एक बैध हुन्थ्यो र पनि सबै स्वस्थ हुन्थे आज हर गल्लीमा मेडिकल र डाक्टरहरु छन र पनि १० जनामा ९ जना बिरामी छन । पहिले ७-८ बच्चा सजिलै जन्माउने आमा ८० बर्ष सम्म पनि घर खेतको काम गर्थिन । अहिले डाक्टरकै निगरानीमा रहदा रहदै पनि पेट च्याथेर बच्चा पाउँछन ।
पहिले भेली (गुण) का डल्लालाई मिठाइ मानेर कोपर्दै खान्थे, अहिले देखेरै शुगर लेवल बढ्छ । पहिले माने कटौरामा हालेर घिउ पिउथे र पनि फिट थिए । अहिले चिल्लो रहित खाएर पनि कोलेस्ट्रोल बढ्छ । सिधा सादा सरल जिबन थियो, मान्छेमा अभिमान थिएन स्वाभिमान थियो १ एक अर्का प्रति दया, सहयोग र स्नेहको भावना थियो १ एक आपसमा सम्मान थियो, चाड पर्वका उत्सवहरु मिलेर मनाउथे हुनेले नहुनेलाई दिएर पर्ब मनाउथे !
अहिले दुनियाभरका समस्याहरु छन, एक अर्कामा तछाँड मछाँड र आडम्वर छ, टुक्रे परिवार छन, आपसी मेलमिलाप स्वार्थमा जोडिएको छ र पनि मुर्खहरुले यसलाई २१ औ सताब्दिको बैज्ञानिक युग भनि ब्याख्या गर्दै छन् । यदि बैज्ञानिक युगको उपज यहि नै हो भने मेरो लागि त्यही अबैज्ञानिक युग नै ठिक । विज्ञान त्यागेर प्रकृतिमै रम्नु ठिक ।
Prevआज कपिलवस्तुमा भेटिएका नयाँ सङ्क्रमितको बारेमा बाहिरियो अर्को नयाँ रहस्य
Nextको हो सुहानाको राजकुमार ? (भिडियो हेर्नुहोस)
१२५ सीसीको डबल सिट भएको पल्सर बाईक आयो; यस्तो छ मूल्य